Shina Lahatsary Mampiaraka: ny Fomba Hilaza Raha ny Shinoa Zazavavy Tia Anao - Iraisam-pirenena ny Fiarahana Torohevitra ho an'ny Lehilahy Mitady Vady Vahiny
Shina Lahatsary Mampiaraka: ny Fomba Hilaza Raha ny Shinoa Zazavavy Tia Anao — Iraisam-pirenena ny Fiarahana Torohevitra ho an’ny Lehilahy Mitady Vady Vahiny
Araka ny China Lahatsary Mampiaraka: Maro ireo olona izay niaraka Shinoa zazavavy an-tserasera, ary dia mikasa ny Sinoa vadiny indray andro any manana izany manahy fa raha mahazo manambady vehivavy Shinoa, dia mety ho liana afa-tsy namela ny firenena na ny mampitombo ny sata ara-toekarena. Mety mbola tsy nitsidika tanibe Shina mialoha sy ny mety ho tsy mitondra ny datin misy Sinoa vehivavy. Noho izany, misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao raha toa ianao ka mieritreritra momba ny fomba hahazoana ny Ankizivavy Shinoa mba toy ny anao na dia efa mampiaraka ny vehivavy Sinoa. Ny iray tena zava-dehibe tokony ho fantatrao momba ny Shinoa ny tovovavy fa izy ireo tsy haneho ny heviny toy izany koa toy ny inona ianao mety ampiasaina amin’ny Eoropeana, na Amerikana vavy. Ankoatra izany, maro ny famantarana sy ny fitadiavana fomba hampandraisana mety handray midika fa ny ankizivavy no tena fihetseham-po fotsiny ny ara-kolontsaina mannerism mifototra amin’ny fitondran-tena lamina izay mampiditra azy ireo nandritra ny am-piandohan’ny taona. Amin’ny ankapobeny, ny vehivavy Shinoa dia nampianatra ny fitondran-tenany manokana fomba mba hahita fiainana tsara mpiara-miasa. Rehefa tonga olon-dehibe, ireo fitondran-tena lasa latsa-paka lalina ao amin’ny atidoha izy ireo ary tsy tena mahafantatra fa izy ireo dia fihetsika toy izany. Zava-dehibe iray hafa tokony ho fantatrao dia fa amin’ny kolontsaina Sinoa, olona afaka mahazo manambady raha tsy misy, raha ny marina ho amin’ny fitiavana. Na dia izany aza, izany dia tsy tokony hanakivy anao, satria misy an-tapitrisa ny Sinoa vavy avy teo izay ianao be fitiavana, be fiahiana, tena izy, ary mazava ho azy fa tena tsara tarehy sy sexy. Ny ankamaroan’ny vahoaka Shinoa momba ny fitiavana ho amin’ny asa, fa tsy ny fihetseham-po. Ohatra, raha nisy olona sasany no tia ny zavatra ho anareo, dia azo lazaina fa olona tena tia anao.
Rehefa ny Sinoa zazavavy dia milaza aminareo fa izy no miahy anareo fa na dia malahelo ianao, dia zavatra tokony hitondra tena am-pahamatorana. Ary nanonona ny teny hoe»izaho no tia anao»mety ho voajanahary hafa eo amin’ny kolontsaina na izany aza ao Shina, izany dia toy ny manao hoe»izaho no»amin’ny fifandraisana. Ny Sinoa sipa dia saika azo antoka fa tsy avy nilaza izany izy mandra-dia tanteraka ny sasany fa izy dia midika hoe ny teny rehetra. Miaraka amin’izany ao an-tsaina, ny iray dia afaka soa aman-tsara ny milaza fa ny fifandraisana ihany no afaka mahazo mafy orina kokoa avy eto amin’ny avy. Izao fa anao hahafantatra izy dia ho anao, ianao afaka ny ho tsara fanahy kokoa ho azy ary izy dia ranonorana amin’ny fitiavana ianao nihevitra fa tsy ho vita. Zavatra iray hafa izay afaka mampiseho fa ny Sinoa zazavavy dia lalina kokoa noho ny ara-dalàna ny fihetseham-po ho anao no izy rehefa manomboka ny maha-zava-dehibe momba ny fahasalamana. Kolontsaina sinoa manantena ny vehivavy (indrindra ny vadiny) mba haneho ny ahiahiny ny sasany noho ny vadiny ara-pahasalamana. Maro tsara tarehy ny vehivavy Shinoa koa ny mampiasa ity fomba ity mba hanome ny olona ny famantarana fa izy no miahy azy. Noho izany, raha vao manomboka eo amin’ny fifandraisana, ary izy maneho ny ahiahiny momba ny fahasalamana, avy eo dia mety ho miezaka ny milaza aminareo fa izy tena tia anao. Izany no manan-danja iray hafa no famantarana fa izy dia manana zavatra ho anao. Raha manontany izy fa ianao hihaona aminy ny ray aman-dreny, izany ihany no afaka midika izany fa tiany izy ireo mba hijery anareo sy ny manome ny fankatoavana. Izy dia vokatry milaza ny ray aman-dreniny»Eto dia ny lehilahy tiako, ahoana ny hevitrao momba azy.»Tokony handinika ny tenanao tsara vintana raha toa ka nilaza izy fa efa niresaka taminy ny momba ny ray aman-dreny ianao ary tiany ianao mba hihaona aminy.
Afaka ny ho azo antoka fa ny Sinoa zazavavy tia anao fatratra
Victoria Tanora dia vehivavy Sinoa izay mibilaogy momba ny fiarahana vehivavy Sinoa sy ny fomba hiatrehana ny fahasamihafana eo amin’ny Shinoa-Andrefana fifandraisana. Ianao rehefa miaraka amin’ny ankizivavy Shinoa sy ny samy ianareo no tena mavitrika amin’ny haino aman-jery sosialy, izany dia manara-penitra mba raha tsy tianao sexy rosiana ny zaza menavava ny totohondriny dia ny tarehiny na ny manakana tsotra fotsiny mandinika ny hafatra ho an’ireo izay mitady teny ny zazavavy ho amin’ny daty, eto izahay mba fahazoan-dalana Lata daty. Lata daty Reviews manampy anao tsaratsara kokoa ny hahafantatra ity toerana sy ny tolotra omeny
← Izay mihaona amin'ny lehilahy iray any Azia. Kokoa Internals Sehatra Fiadian-Kevitra
Tsara Indrindra Maimaim-Poana Aziatika Mampiaraka Toerana →